Kedu ka ụmụ okorobịa na-esi bụrụ nwa agbọghọ?
Ọ dịghị akụkụ nke ndụ anyị gbara ọtụtụ akụkọ ifo dị ka mmekọahụ. Ajụjụ nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke na nke a enweghị nha. Ọbụna ma ọ bụrụ na isiokwu nke nwanyị na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha, a na-enye ya otuto ma n'otu oge ahụ "na-ata ata," mgbe ụfọdụ, ajụjụ ndị na-adịghị mma na-apụta, ma ọ dị mma na-ekwu na amaghị nwoke na ụmụ nwoke na-agbanye agbamume nke ukwuu karị, mgbe ụfọdụ nke dị anya site n'eziokwu ahụ. Ya mere, gini bu umuaka nke umuaka, oleekwa otu ha si 'gbafuo' ya, n'ozuzu ya, ka ndi ozo gbue ha n'amaghi nwoke - isiokwu nke isiokwu anyi taa.
Ụgha na Eziokwu
Ụgha akụkọ 1. Ụmụ okorobịa na-eleghara nwa agbọghọ na-amaghị nwoke anya karịa karịa ụmụ agbọghọ
N'ọtụtụ mba, akụkọ ihe mere eme kemgbe ọtụtụ narị afọ na-ebuli hymen ahụ n'ọkwá nke ihe dị nsọ, nke ụmụ agbọghọ ga-echebekwa n'ụzọ ọ bụla. Ma ọ bụrụ na nwanyị nwere ike ịdị mpako maka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, mgbe ahụ, nwoke, dịka iwu, na-achọ iwepu aha "nwa agbọghọ", ozugbo o kwere mee, ọ dịkarịa ala n'okwu. Ya mere, e nwere ụmụ nwanyị dị afọ 13-ndị hụrụ ha n'anya, jiri obi ha dum kọọrọ ndị ọgbọ ha ihe ndị mere ha. Onye ọzọ na-amaghị nwoke na-amaghị nwoke chọrọ ịjụ ajụjụ banyere mmekọahụ, mana mmadụ ole na ole maara nwanyị, na-abanye na afọ mgbanwe. Enweghi nwoke n'adighi nwoke ma obu nwa nwoke na eme mgbe ozo - na afo iri na isii na iri na isii (nka bu kwa ezi, n'ihi na n'oge nwata, umuaka adighi njikere maka inwe mmekorita nwoke na nwanyi). N'ihe dị ka ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị okenye na-amaghị nwoke, ihe karịrị afọ 25. Ọtụtụ n'ime ha na-ama ụma izere mmekọrịta chiri anya, na-ahọrọ "enyi nwanyị" site na ụlọ ahịa ndị inyom ma ọ bụ site na ụwa ndị dị elu.
Echiche Ụgha nke 2. Ọ bụrụ na nwa ahụ ka bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, mgbe ahụ ọ dị njọ ma ọ bụ na-arịa ọrịa
Ihe kpatara nsogbu nwoke na-amaghị nwoke na ụmụ nwoke nwere ike ịrụ ọtụtụ ihe: ihe gbasara ọrịa nke onye òtù (mgbatị, akụkụ ndị ọzọ), ihe mbụ na-enweghị ihe ịga nke ọma, ihe mgbochi okpukpe ma ọ bụ nlekọta siri ike. Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke pụrụ ịbụ ịhụnanya nke na-edebe onwe ya maka onye mbụ na naanị ya.
Echiche Ụgha nke 2. Ụmụ okorobịa na-emerụkwa ahụ ka ha ghara ịghọ nwa agbọghọ
O yikarịrị ka akụkọ ụgha ahụ dabeere na ihe dịka phimosis - ọgwụgwọ ma ọ bụ (nke na-adịkarịghị) na - agbatị nke mgbanaka ihu, nke na-egbochi njupụta zuru oke nke mkpanaka ahụ. N'eziokwu, nwoke na-amaghị nwoke ma ọ bụ nwoke na nwanyị adịghị egosi ya n'ụzọ ọ bụla, ya bụ. nwa agbọghọ na-amaghị nwoke na ụmụ nwoke pụtara nanị enweghị enwe mmekọahụ na onye òtù ọlụlụ. Ọ bụrụ na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nwere ike inye aka kwụsị esemokwu n'ebughị ụzọ banye n'ime ikpu, ọ pụtara. ọ bụghị ịmalite inwe mmekọahụ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, n'ọnọdụ ọ bụla, enweela ụdị nkwarụ na mkparịta ụka ọ bụla n'ahụ ya, nke mere na nwanyị ahụ nwere ike inye ya nsogbu ọ bụla.
Ụgha okwu nke atọ. Oge mbụ na-adịru mgbe sekọnd ole na ole
Enwere ike ịdọpụ nwa okorobịa na-amaghị nwoke na nwa agbọghọ ruo ogologo oge n'ihi na ọ ga-atụ egwu na ọ gaghị emezu ihe ndị ọ tụrụ anya ya. Dika usoro enyere anyi site n'inye akwukwo, nwoke aghaghi itinye aka oru. Ọ bụrụ na nwa okorobịa ahụ anwaghị ekwupụta nwa agbọghọ ahụ na ọ bụ onye aka ya dị ọcha, mgbe ahụ, ọ ga-abụ na ọ ga-abụ na ọ ga-enwe oke ụfụ. Enwere ike inwe nsogbu na erection ma ọ bụ ejaculation. Enweghi ike na-amaghị nwoke na nwa okorobịa nwere ike ọ gaghị ejide ya na orgasm ma ọlị. Ọ bụ ezie na oge ụfọdụ, n'ezie, "isi iyi nke mmetụta uche" amalite ịkụ ọkpọ.
Kedu otu esi egbochi nwoke na-amaghị nwoke?
Ọ bụrụ na nwa okorobịa gị kwupụta na ya enwebeghị ahụmahụ mmekọahụ, ọ dị mkpa ịghọta na ị nwere nnukwu ọrụ. Ee, ọ bụ ọrụ, n'ihi na ọ dịghị onye na-enwe obi abụọ na nwoke na-emejọ onye na-amaghị nwoke, aghaghị ịdị nro na nlezianya. Eziokwu ahụ bụ na ọ bụghị n'ụzọ ọbụla ka a na-egosi nwoke na-amaghị nwoke na nwanyị, na ọ bụghị ịkagbu nsogbu nke uche mmadụ. Site na esi agba ụmụ nwoke na-amaghị nwoke, n'ọdịnihu, ndụ ha nile nwere ike ịdabere.
O nweghị ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-achị nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ma ọ bụ na-achị ọchị, ọ bụrụ na ọ na-edina ụra, bụrụ ihe na-adịghị mma. Emela ngwa ngwa, jiri nlezianya duzie onye gị na ya, ngwa ngwa (zere ụda mgbochi), ihe ndị ị na-achọ karịa, "na-agba ume" mkpuchi ndị a na-amanye. Dehie nwa okorobịa ahụ, na-egosipụta agụụ ahụ, bụ nke ọ kpatara maka ihe kpatara ya kpatara ya, ọ bụghịkwa ya. Ọ dị mkpa inwe ndidi, n'ihi na ọ bụrụ na a na-ahapụ ụmụ nwanyị ka ha chụọ àjà na-amaghị nwoke ma na-emeghe anya na-atụ egwu, nwata ahụ ga-egosipụta ma ọ dịkarịa ala ụdị ụdị ọrụ. N'ọnọdụ ọ bụla, echefula na ọrụ gị abụghị naanị iji gbochie nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, kamakwa iji nwee obi ụtọ. Ugbu a, ị nwere ohere magburu onwe ya ịme ka ị bụrụ ezigbo enyi "maka onwe gị".
Nwoke ahụ bụ nwa agbọghọ
Kedu otu esi amata nwanyi?
Kedu ka ị ga-esi tụọ ime n'enweghị nchebe?
Otu esi eme ka di di nma?
Anilingus - esi eme ka onye na-arịa ọrịa na-agwọ ọrịa n'ụzọ ziri ezi, ihe kasị mma maka onye ọrịa
Esi chebe onwe gi site na ime imeghi ya?
Ụkwụ ikpere ụkwụ
Kedu ụdị mkpuchi maka ụlọ dị mma?
Utu casserole na apụl - ihe ụtọ ma dị mfe ntụziaka maka ezinụlọ dum
Ọgwụgwọ osteoporosis na ụmụ nwanyị
Nri na glomerulonephritis
Okenye nke okenye na ndị okenye
Mmiri fudge - uzommeputa
Baden-Baden - nleta nleta
Gini mere akwukwo ji adi nma n'osisi ego?
Uru nke Persimmon maka Ọla Eru
Kedu oge - ihe mere i ji chọọ ya na onye ị ga-ahọrọ?
Mgbochi maka mgbidi nke ụlọ n'èzí n'okpuru siding
Ụdị shuga shuga 2 - nke shuga nke ọbara
Njirimara uru nke semolina porridge
Kedu ka esi tufuo eriri na aka gị?
Ihe ndị na-emepụta akwụkwọ mpịakọta
Ihe omuma: 13 eserese di iche iche erere otutu nde
Soda na-eme achịcha maka ọnwụ na - efu - esi ewepu n'ime?
Uggs - oyi - ejiji 2016-2017